Inona no atao hoe Therapy Proton - Ahoana ny fomba fiasa - Proton California
Fitsaboana kankana marobe azo antoka, fitsaboana kely noho ny fitsaboana kankana
California Protons dia mampiasa ny teknolojia beam revolisiona amin'ny revolisiona mba hanampiana amin'ny ady amin'ny homamiadana miaraka amin'ny fepetra tsy miova ary ny fikarakarana faran'izay lehibe.
Inona no atao hoe Proton Therapy?
Ny fitsaboana Proton dia endrika mivaingana tena mahery sy tsy dia mahery loatra amin'ny fitsaboana ny homamiadana. Ny proton dia singa subatomika miaraka amina fiampangana mety azo zakaina ary fehezina hijanona sy hampita ny taratra mivantana amin'ny fivontosana, tsy mandeha lavitra afa-tsy ny rindrin'ny fivontosana ivelany. Izy io dia mahasoa indrindra ireo izay marefo amin'ny taratra na efa nahazo taratra mialoha na koa teo akaikin'ny faritra tokony hotsaboina.
Fahazavana X-ray mahazatra
Ny taratra X-ray manara-penitra sy ny proton dia samy mampiasa ny radioterika "beam ivelany" izay ampiasaina amin'ny fitsaboana kansera isan-karazany. Na izany aza, ny toetran'ny tsirairay dia samy hafa ary vokatr'ireo fiparitahan'ny taratra samihafa. Ny vondron-tsaramaso X-ray manara-penitra dia mametraka angovo eo an-dàlany alohan'ny hahatratrarana ny fivontosana, ka mamindra ny taratra tsy ilaina sy manimba ny hozatra ara-pahasalamana sy ireo taova manodidina. Ny fatra fitsaboana proton, etsy ankilany, dia azo fehezina hametrahana ny ankamaroan'ny angovo ao anaty fivontosana.
Tsy misy fiampangana faobe na herinaratra
Ny tara-po manosika be dia be afaka miteraka taratra amin'ny ambaratonga rehetra
Taratra ny fatra amin'ny taratra voalohany (fatra fidirana) akaikin'ny hoditry ny marary, raha mifanerasera amin'ireo sela salama akaikin'ny rano, ary avy eo ajanony ny fatra azo avy amin'ny taratra mihena eo amin'ireo sela marary mafy kokoa.
Ny tara-pahazavana dia mitohy hatrany amin'ny taratra satria mandalo fotsiny ny vatana (fivoahana fatra) mitovy amin'ny fandefasana sinora-X
Taratra Ramatoa ny penina Protil Beam
Beam-by Proton vita amin'ny singa mavesatra sy be lanja
Miditra amin'ny vatana ny proton ary mametraka dosie kely kely fotsiny alohan'ny lalana mankamin'ny lasibatra ary saika tsy misy afa-tsy izany
Mitombo tsikelikely ny fatran'ny tsiranoka voageja miaraka amin'ny fatra lehibe kokoa ary ny haingam-pandeha ambany kokoa mandra-pahatongan'ny andry ny tampon-jaza Bragg - ny fotoana nametrahana ny angovo farany -izay tarihina mivantana ao amin'ny tranokalan'ny fivontosana
Avy hatrany aorian'ity fipoahan'ny angovo ity dia tonga ny fihenan-dohan'ny proton ary mijanona ny taratra fanampiny
Teknolojia Scanning Technology
Navoaka tamim-pahatapahana tao anatin'ny 2 milimetatra, ny teknolojia fanodinam-baravarankely misy pensilihazo (fantatra amin'ny hoe Intensity Modulated Proton Therapy na IMPT) dia mamoaka fatra fanafody famonoana homamiadana izay mifanaraka amin'ny endrika sy ny haben'ny fivontosana. Na dia any amin'ny toerana sarotra itadiavana aza, ny dokotera dia afaka mitarika sy manodikodina ny vatan'ny protonine mba hampijanonana tanteraka eo amin'ny sisin'ny fivontosana mba hamelomana ireo tavy mahasalama sy ireo taova manodidina.
Tsy toy ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha, ny teknolojia scanam-baravarankely amin'ny proton afovoany dia manatsara bebe kokoa ny famaritana ny taratra taratra. Amin'ny alalàn'ny mpitsabo ny handrindrana ny sakany sy ny hamafin'ny sezan'ny proton, dia afaka mamily tsipika proton tery izay miampita ny fivontosana amin'ny tadio tsara isika, raha mampitombo ny hamafin'ny hafanana sy ny fatran'ny tsiranoka ao anaty fivontosana. California Protons no toeram-pitsaboana voalohany an'ny firenena nanolotra ny teknolojia protam-basy amin'ny alàlan'ny dimy amin'ny efitrano fitsaboana anay.
Cone Beam CT Fampandrenesana
Ny Centre Therapy cancer de la côte de California any San Diego no hany fitsaboana fitsaboana proton ao California rehetra, ary iray amin'ireo am-pita vitsy monja any Etazonia, hampiasa tsy tapaka ny Cone Beam CT (CBCT). Ity fandrosoana malaza amin'ny imaging CT ity dia manampy antsika hitondra ny haitao mandroso indrindra amin'ny marary ataontsika.
Nampiasaina niaraka tamin'ny teknolojia fitiliana onjam-pandrefesana anay, Cone Beam CT dia manome endrika maoderina kokoa, haingana kokoa ary azo antoka kokoa amin'ny fakana CT tsy tapaka. Amin'ny alàlan'ny fampiasana vantona X-ray misy kofehy, mihena ny habetsaky ny taratra, ny haben'ny scanner sy ny fotoana ilaina anaovana ny scanning dia mihena avokoa, raha mihatsara ny fampitana ny sary. Ny fotoana ilaina hanaovana scan manontolo dia matetika eo ambanin'ny iray minitra ary ny fatra amin'ny taratra dia mihoatra ny zato mahery noho ny an'ny scanner CT tsy tapaka.
System Varian ProBeam Proton
Ny afovoan-protonantsika dia fonenan'ny rafi-panatanjahantena lehibe indrindra an'ny fanjakana ao amin'ny firenena, izay ahitana cyclotron, beamline, efitrano fitsaboana roa beam ary ny efitrano fitsaboana fitsaboana gantry telo.
Ny Cyclotron dia fitaovana iray milina 90 taonina mba hamorona fitaovana mitentina 5 trillion isan-tsegondra avy eo ary hanafaingana ny protonne mivoaka avy eo afovoany manaraka lalan-kaleha any amin'ny 100,000 kilaometatra isan-tsegondra, na 0.61 avo ny hafainganam-pandehan'ny hazavana, mba hamoronana vola izay mety mahatratra fivontosana mivantana. Ny beam proton dia mivezivezy amin'ny cyclotron mankany amin'ny tsipika amin'ny vatan-jiro, izay manaloka ny halavan'ny tranokala, ary mampiasa andiana elektromagnétana hiondrika sy hampifantohana ny andry ho ao amin'ny efitrano fitsaboana tsirairay. Avy any, ny proton dia natolotra miaraka amin'ny fametrahana mekanika iray amin'ny iray amin'ireo efitrano fitsaboana fitsaboana beam roa roa na efitrano gantry rotaka telo amin'ny alàlan'ny tolona manokana. Ny milina gantry rotaka 280 taonina dia mihodina manodidina ny marary amin'ny fiantohana ny marary.
7 Fahasoavana lehibe amin'ny teknolojia Beam teknolojia Proton Therapy
Laser-toy ny famaritana
Azo atao hosoka ny protons mba hampijanonana sy handefasana taratra mivantana amin'ny fivontosana ary tsy hisy intsony.
Ny fatra miova ny taratra
Ny fitsaboana Protonon dia mamela ny dokotera hanova ny hamafin'ny fihanaky ny taratra amin'ny fotoana rehetra ao anaty fivontosana, izay tsy nety tamin'ny teknolojia hafa.
Fitsaboana ho an'ny karazan'aretin'ny fivontosana
Ny teknôlôjia fitsaboana protonintsika dia mampivelatra ny safidy fitsaboana hikarakarana fivontosana lehibe kokoa sy tsy miovaova. Io koa dia mamela karazan'aretin'ny fivontosana be dia be raha oharina amin'ny mety hitranga amin'ny proton miparitaka be.
Ny fihenan'ny fivontosan'ny ambany
Ny fanapoizinan'ny taratra mihena dia miteraka fihenan-doha ambany ambany raha oharina amin'ny taratra X-ray mahazatra.
Satria ny fitsaboana proton dia miaro ny hozatra mahasalama manodidina ny fivontosana iray, ny voka-dratsiny toy ny aretim-pivalanana, lozoka, aretin'andoha ary ny fahaverezan'ny fahazotoana dia miharatsy. Aorian'ny fitsaboana dia mitohy ny fanaony isan'andro.
Fotoana fitsaboana haingana
Nosoloinay ireo teknolojia protères mavesatra sy mampihetsi-po namboarin'ny teknolojia protifototra pasifika sy fanamainam-by be. Tsy toy ny teknolojia taloha, ny drafitra fitsaboana antsika dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny iray minitra mba hahafahan'ny marary miverina haingana.
Ny fikarakarana manokana
Ny ekipa mpitsabo malaza eto an-tany dia nanaiky ny hanomezana fikarakarana mararin'ny tena manokana ho an'ny marary antsika, ary manolotra ireo farany amin'ny fandrosoana ara-pitsaboana sy ny teknolojia. Hamantatra bebe kokoa
Pitsopitsony fitsaboana Proton fitsaboana &
Fiainana mandritra ny fitsaboana
Ny fitsaboana Proton dia fitsaboana tsy misy dikany ary matetika tsy mampahory, izay mahatsapa ny marary tsy mahatsapa fahatsapana ara-batana amin'ny vay proton, mandre feo kely sy mahatsapa fahasosorana kely loatra. Tsy toy ny teknolojia taloha, ny fotoam-pitsaboana tsirairay dia mitaky 30 minitra, miaraka amin'ny fotoam-pitsaboana tena maharitra 1 ka hatramin'ny 3 minitra fotsiny. Lahatsary sy feo roa mandeha tsara dia ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpitsabo sy ny marary mifampiresaka mandritra ny fizotrany rehetra.
INDRINDRA INDRINDRA NY Vokatry ny PROTON THERAPY?
Amin'ny tranga maro, ny voka-dratsin'ny lafiny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana aretin-jaza ivelany toa ny aretim-pivalanana, aretin'andoha ary ny fahaverezan'ny fahazotoana dia vitsy kokoa amin'ny fitsaboana protonena noho ny fitsaboana X-ray. Ny ankamaroan'ny marary dia afaka manohy ny fanaony mahazatra mandritra ny fitsaboana azy ireo, ao anatin'izany ny fiasa, ny fanatanjahan-tena ary ny fiaraha-monina. Na izany aza, ny fitsaboana homamiadana rehetra dia manana tombony sy fatiantoka. Aza adino ny miresaka momba ny mety hiteraka aretina sy ny voka-dratsiny, ary koa ny safidy fitsaboana miaraka amin'ny oncologist anao.
Fanontaniana momba ny fitsaboana proton? Afaka manampy isika.
Ianaro ireo FAQ
Tantaran'i Theron Beam Therapy
Tamin'ny 1946, ny fizika amerikana sy ny mpitarika ny tetikasa Manhattan taloha Robert Wilson dia nametraka ny fototra ho an'ny sehatry ny fitsaboana proton miaraka amin'ny famoahana ny takelaka nosoratany, "Ny fampiasana Radiological an'ny Fast Proton." Ao amin'ity taratasy ity, izy no voalohany nanome soso-kevitra fa azo ampiasaina klinika ny proton, miaro ny tenda ara-dalàna ary manome alalana farany ny fatran'ny taratra ao amin'ny fivontosana.
Ny fitsaboana ny fampielezankevitra voalohany dia natao tamin'ny tapaky ny taona 1950 tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny akora accelerator namboarina ho an'ny fikarohana momba ny laboratoara fizika tao amin'ny University of California, Berkeley, ary taty aoriana tao amin'ny Harvard Cyclotron Laboratory. Ny ivon-toeram-pitsaboana voalohany an'ny firenena amin'ny hopitaly voalohany dia nosokafana tamin'ny taona 1990 tao amin'ny Loma Linda University Medical Center any Southern California. Hatramin'izay, maherin'ny roapolo no ivon-toeram-pitsaboana miady saina amin'ny fanokafana no misokatra any Etazonia, ao anatin'izany ny California Protons Cancer Therapy Center any San Diego.
Ny vidin'ny fitsaboana Proton Therapy
Ny vidin'ny fitsaboana proton dia miankina amin'ny karazana homamiadana, ny toerana misy ny fivontosana, ny sehatra, ny isan'ny fitsaboana ilaina ary ny antony hafa. Na dia amin'ny tranga sasany aza dia lafo kokoa noho ny taratra X-Ray nentim-paharazana, ny fihenan'ny fotoana maharitra sy ny vintana hiverenana dia mihena noho ny haitao mandroso sy marina kokoa izay mampihena be ny taratra amin'ny sela sy taova salama akaiky.